ကျွန်တော်သည်... — MYSTERY ZILLION
anonymgod ပါ . myanmarstudentsorganization web လေး လုပ် ဖို. ကိုစေတန် ကို အကူအညီတောင်းနေတာ ပါ .. အခုလောလောဆယ်တော. ကို infof နဲ. တော. ချိတ်မိပြီ ။ ကိုစေတန် ဆီကတော. reply မရသေးပါ. မအားလို.ထင်တယ်. MZ က ဝိုင်းဝန်းကူညီပါ လို. :6::77:
whatever thz ကူညီမယ် ဆိုရင်တော. [email protected] မှာ add နိုင်ပါတယ်